HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Danoà Espaniola Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tiorka Tseky Vietnamianina Yorobà
1 APRILY 2019
Nomelohin’ny fitsarana rosianina iray i Sergey Skrynnikov, lehilahy 56 taona, tamin’ny 1 Aprily 2019, noho izy Vavolombelon’i Jehovah. Io fitsarana io ihany ilay nanameloka ny Rahalahy Dennis Christensen higadra enin-taona. Nodidian’ilay fitsarana handoa lamandy 19 500 000 ariary mahery (350 000 RUB) izy. Nangataka ny hanagadrana azy telo taona ny mpiampanga, nefa tsy nanagadra azy ilay fitsarana.
Manan-janakavavy iray ny Rahalahy Skrynnikov sy Nina vadiny. Izy mivady no manampy an’io zanany vavy io sy ny vadiny ary ny zanak’izy ireo dimy. Izy mivady koa no tena mikarakara ny ray aman-drenin’i Nina izay efa be taona.
Feno fanajana sy nandresy lahatra ny fiarovan-tena nataon’ny Rahalahy Skrynnikov teo anatrehan’ny fitsarana. Izao ny ampahany amin’ny zavatra nolazainy: “Raha olona tsy mino an’Andriamanitra no teo amin’ny toerako, dia mety ho kivy izy. ... Vavolombelon’i Jehovah anefa aho dia manam-pinoana. Raha avelan’Andriamanitra higadra telo taona aho, dia tsy horaisiko hoe sazy ilay izy fa fanendrena manokana hitory any amin’ny toerana vaovao. Dia tsy kivy aho. ... Afaka manampy antsika foana Andriamanitra na migadra isika na tsia. Tsy irery mihitsy àry isika fa miaraka amintsika foana izy raha mbola tsy mivadika aminy koa isika.”
Mampahery antsika ny mahita hoe tena matanjaka ny finoan’ny mpiara-manompo amintsika, hoatran’ny Rahalahy Skrynnikov. Rehefa mahita ny fanenjehana mahery vaika mihatra amin’izy ireo isika, dia te hiteny hoatran’ny apostoly Paoly koa hoe: “Ilay Andriamanitra manome fanantenana anie hameno anareo amin’ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra noho ny finoanareo, mba hitombo be ny fanantenanareo noho ny herin’ny fanahy masina!”—Romanina 15:13.
Teny Famaranana Nataon’ny Rahalahy Skrynnikov
Nadika avy tamin’ny teny rosianina
Voalohany indrindra, dia te hisaotra ny Mpitsara Gleb Borisovich Noskov aho satria tsy notanany am-ponja [vonjimaika], ka afaka niaraka tamin’ny fianakaviako foana. Te hisaotra ny mpiasan’ny fitsarana rehetra koa aho amin’ny asa ataon’izy ireo.
Misaotra manokana ny Rtoa Nadezhda Gennadiyevna Naumova, mpampanoa lalàna, koa aho satria nizotra nilamina tsara ny famotorana ahy fa tsy nisy fanerena an-kolaka.
Tiako koa ny hisaotra ny mpisolovavako, Rtoa Irina Aleksandrovna Krasnikova sy Atoa Anton Nikolayevich Bogdanov, tamin’ny asa tsara be nataon’izy ireo. Tsoriko fa tena gaga aho rehefa nitondra manam-pahaizana avy any Tcheliabinsk ry zareo.
Misaotra anareo namako koa tonga nanotrona ahy tatỳ amin’ny fitsarana foana, na dia efa fantatra aza hoe tsy ho afaka hanatrika an’ilay izy ianareo.
Misaotra an’i Neny satria na dia tsy salama aza ianao dia nanotrona ahy teto amin’ny fitsarana foana.
Misaotra ny vadiko koa aho satria nanohana ahy foana izy nandritra an’izay 37 taona izay, na tamin’ny mora na tamin’ny sarotra.
Mazava ho azy fa i Jehovah Andriamanitro no tena isaorako indrindra, satria nampiany hanana fo tony sy falifaly foana aho. Mety ho gaga ianareo raha ilazako hoe tsy tezitra na malahelo mihitsy aho amin’izao mahazo ahy izao fa faly dia milamin-tsaina.
Tsapako hoe tanteraka amiko ny 2 Korintianina 4:8, 9: “Voageja amin’ny lafiny rehetra izahay, nefa tsy hoe tery loatra ka tsy afa-mihetsika. Very hevitra izahay, nefa tsy hoe tsy misy lalan-kivoahana mihitsy. Enjehina izahay, nefa tsy afoy. Azera izahay, nefa tsy maty.”
Midika izany hoe ho voageja sy henjehina ny mpanompon’Andriamanitra nefa mbola hitohy ihany ny asa fitoriana nankinin’i Jesosy Tompo tamin’izy ireo sady vao mainka hihabetsaka ny olona handre ny vaovao tsara sy hitory momba an’izany. Mihatra amin’izay miezaka manara-dia an’i Kristy ireto teny ireto:
Maniraka antsika ny Matio 28:19, 20 hoe: “Koa mandehana àry, ataovy mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra, ka ataovy batisa amin’ny anaran’ny Ray sy amin’ny anaran’ny Zanaka ary amin’ny anaran’ny fanahy masina. Ampianaro izy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo. Ary homba anareo foana aho, mandra-pahatongan’ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.”
Mitarika ny Kristianina foana ny fanahin’i Jehovah ka manome azy ireo hery mihoatra noho ny mahazatra. Izany no ahavitany ny asa ampanaovin’Andriamanitra azy na dia enjehina aza izy ireo. Vao mainka isika resy lahatra ny amin’izany rehefa jerena izay nitranga taloha. Nieritreritra ny mpanompon’Andriamanitra, 80 taona na 90 taona lasa izay, hoe tsy ho vitan’izy ireo mihitsy ny hitory momba ny Fanjakan’Andriamanitra manerana ny Firaisana Sovietika. I Kristy anefa no mitarika ny fitoriana ka nataony azo antoka hoe ho vitan’ny Vavolombelon’i Jehovah izany. Afaka 20 taona teo ho eo àry, dia ny fanjakana sovietika mihitsy no nandefa fianakaviana Vavolombelon’i Jehovah an’arivony hankany Siberia, any lavitra any, nefa tsy mandoa saran-dalana. Efa 60 taona [mahery] izay no lasa, dia inona no nitranga? Gaga ny manam-pahefana manerana an’i Siberia rehefa hitany hoe niparitaka hatraiza hatraiza ny fitoriana. Nilaza ny manam-pahaizana iray mahalala tsara ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny andron’ny URSS hoe very maina fotsiny ny ezaka ataon’izay miady amin’ny Vavolombelon’i Jehovah, satria arakaraka ny hanenjehana azy ireo dia vao mainka izy ireo miparitaka sy lasa lavitra.
Hoatr’izany indray izao no iainan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Iza no hitanay rehefa mitory isan-trano izahay? Mpikarakara tokantrano sy olona be taona. Sarotra ny mahita mpiasa any an-tranony. Sarotra koa, ary indraindray aza tena tsy azo atao mihitsy, ny mitory any amin’ny trano tsara ambina, na fonja, na fitsarana, na fanaovana asa an-terivozona. I Kristy anefa no mitarika ny fitoriana, dia [nataon’i Jehovah] ao am-po sy ao an-tsain’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny hanatanteraka ny Sitrapony. Lasa manampy ny Vavolombelon’i Jehovah hitory amin’olona betsaka kokoa ny Minisiteran’ny Fitsarana, ny Komity Mpanao Famotorana eto amin’ny Federasionan’i Rosia, ny biraon’ny mpampanoa lalàna, ary ny fikambanana hafa mpampihatra lalàna. Nahoana? Satria noho ny ataon’izy ireo dia miresaka momba an’i Jehovah Andriamanitra, ilay Mpanjakan’izao Rehetra Izao, ny mponina eto Rosia. Na any an-tranony, na any am-ponja, na eny amin’ny fitsarana, na eny amin’ny fiasana an-terivozona, dia miresaka momba an’i Jehovah ny olona any Kaliningrad ka hatrany Sakhaline sy any amin’ny Nosy Kouriles, any Arkhangelsk ka hatrany Crimée sy Yalta. Tsy nino mihitsy izahay Vavolombelon’i Jehovah hoe ho vitanay ny hitory amin’olona be dia be hoatr’izany. Misy varavarana misokatra ho amin’ny fanompoana izao mba hahafahana mitory amin’ny fomba vaovao sy any amin’ny toerana vaovao. Tombontsoa be ho an’ny Vavolombelon’i Jehovah ny mitory ny vaovao tsara any amin’ny toerana vaovao, dia ny biraon’ny mpampanoa lalàna no manampy anay hanao an’izany.
Izao no hitranga aoriana kely ao: Raha mbola managadra Vavolombelon’i Jehovah foana ny fanjakana ato anatin’ny folo taona, dia hisy Vavolombelona 200 eo ho eo isaky ny fonja. Eritrereto ange e! Fiangonan’ny Vavolombelon’i Jehovah efatra isaky ny fonja. Hiangavy amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana ny mpiandraikitra ny fonja, amin’izay, hoe afaho ireo Vavolombelon’i Jehovah ireo. Dia ahoana ny vavaka ataon’ny ankamaroan’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’izay? Hoe: “Tompo ô, aza atao malahelo ahy ny mpiandraikitra ny fonja. Aza avela afahany aho. Be dia be ange ny olona ampianariko Baiboly sy ny olona liana tokony hitoriako atỳ e!”
Raha olona tsy mino an’Andriamanitra no teo amin’ny toerako, dia mety ho kivy izy. Mety hiteny izy hoe: “Izaho tsy namono olona sady tsy nangalatra. Tsy niady tamin’olona akory aza aho. Betsaka ny tatitra manamarina an’izany, nefa dia ampangain’ny olona aho dia tiany higadra telo taona.” Hoatran’ny mahakivy izany. Vavolombelon’i Jehovah anefa aho dia manam-pinoana. Raha avelan’Andriamanitra higadra telo taona aho, dia tsy horaisiko hoe sazy ilay izy fa fanendrena manokana hitory any amin’ny toerana vaovao. Dia tsy kivy aho. Raisiko ho tombontsoa be izany, tombontsoa hanompo an’Andriamanitra any amin’ny toerana mbola tsy misy Vavolombelon’i Jehovah. Efa vonona hihaino ny fitoriana izao ny olona any satria efa nampiomanin’ny mpanao gazety. Izao no fotoana tokony hitoriana any.
Afaka manampy antsika foana Andriamanitra na migadra isika na tsia. Tsy irery mihitsy àry isika fa miaraka amintsika foana izy raha mbola tsy mivadika aminy koa isika. Raha ny amiko, dia matoky aho fa hitan’Andriamanitra ny fahasalamako ara-batana sy ara-panahy. Ka raha izay no tiany, dia hataony ao am-po sy ao an-tsain’ny mpitsara ny hanaiky ny fangatahanao hanagadra ahy, Rtoa Naumova. Miandry ny hahatongavan’ny 1 Aprily aho. Manome toky ahy ny Hebreo 13:6 hoe: “Jehovah no mpanampy ahy, ka tsy hatahotra aho. Inona moa no azon’ny olona atao amiko?” I Jehovah Andriamanitra mihitsy no hanampy ahy ka iza no hatahorako?
Ezaka Manokana Hanoratana Taratasy Hanohanana ny Rahalahintsika any Rosia—Avy any Malawi